KDE Kube, uyo anotevera anotevera KMail? | Linux Vakapindwa muropa
Nhau dzichangoburwa nezve maburi ekuchengetedza muchirongwa cheKMail chakonzera vazhinji vashandisi kusiya KDE email mutengi, kunyangwe vachiramba vachishandisa Plasma kana KDE kunyorera. Asi, pakati pevaya vachiri neKMail ivo vari kushamisika kana KMail ichienderera mberi kuve iko kunyorera email kweiyo KDE Project.
Ndokusaka manzwi ari kubuda achibatsira iyo KDE Kube application. Manzwi achikumbira kuti ive yekushandisa kwekusarudzika kwe gadzirisa edu maemail, makarenda uye vanobata. Zvisinei, ichi hachisi chinhu chepamutemo.
KDE Kube yakaburitswa kutanga kwegore rino uye yakavimbisa kuve izere uye inoshanduka-shanduka nzvimbo yekutaurirana yemushandisi wanhasi. Asi zvakadaro yanga isina yakagadzikana vhezheni. Mwedzi yakati gare gare, nebudiriro yega yega, vashandisi vakagutsikana nekubudirira kwechombo uye kuti chingazotsiva sei KMail.
KMail chishandiso chakanangana nekugadzirisa email kubva kuPlasma desktop. Ichi chishandiso chave chakatenderedza KDE padanho kubva pakutanga kwayo uye zvinoreva kuti chishandiso chekare Mune zvimwe zviitiko chave chishandiso chechinyakare icho vashandisi vazhinji vasinganyatso kugutsikana. Iyo gomba rekuchengetedza harina kuve rakakomba, nekuti vashandisi vazhinji nevasori vanga vasingazive nezvegomba rekuchengetedza asi zvadzamisa mamiriro ekuti KMail rave chishandiswa chekare.
KDE Kube, kune rimwe divi, chishandiso chazvino. Izvo zvakagadzira inoenderana email, makarenda, kutaurirana, uye manotsi nekukurumidza uye nyore kuita. Iko kunyorera kwakafanana nenzvimbo yekutaurirana, nzvimbo yatine kutaurirana kwese pc pasina kuvhura imwe chirongwa kana pasina kushandisa zvinowedzera. Chii chimwe chirongwa chinoshanda pasina, chimwe chinhu chisingaitwe neese maapplication efoni.
Ini pachangu handidi KMail, handisati ndamboifarira. Uye nezve KDE Kube ndinofanira kutaura kuti iyo chokwadi kuti haina kugadzikana zvakadaro inoita kuti ndifunge zvisizvo. Asi, kana ndichifanira kusarudza, ndinonamatira ne KDE Kube. KMail yave kushaya basa seEvolution kana Thunderbird. Asi ndizvo zvandinofunga Ndeipi yaunosarudza? Na KDE Kube kana KMail?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Desks » KDE Kube, uyo anotevera anotevera KMail?
Akatsigira kde Kube kunyangwe ndisina kuishandisa kmail haina kumbondigutsa
Thunderbird, isingachashandi kana kwete, zvirinani kuti inovandudzwa nguva dzose, uye inokurumidza, yakatsiga uye yakachengeteka, ndinoshandisa Thunderbird pasi peGNU / Linux kana Windows nekuti zviri nyore kwandiri kuti ndizarure application ndione maemail angu nekukurumidza, pane isa zvitupa (kana kuzvichengeta) muwebhu browser yangu, sezvo ini ndichigara ndichijekesa nhoroondo, uye ndisingatenderi chero mapassword kuti achengetwe muwebhu browser nekuda kwezvikonzero zvekuchengetedza.
Mune maonero angu, kuomarara kana mukana (zvinoenderana nekuti unozvitarisa sei) iyo iyo KDE inokupa iri mukana uye panguva imwecheteyo Achilles chitsitsinho, nharaunda inovandudzwa, asi hapana maoko mazhinji anotarisisa software yakatenderedza, zvakafanana nezvinoitika kuGnome, uyezve izvo zvinoreva kuti kunyangwe nzvimbo yedesktop iri yakachengeteka, maapplication anouya nayo haana kuchengetedzeka. Zvichida ipapo, nharaunda dzese dzinofanirwa kufunga kuve dzakanyanya modular, uye kuti mamwe mapurogiramu haatsamiri pane zvakatipoteredza uye distros zvakafanana, uye kwete kusanganisa zvese zviri meta-package, kana zvirinani bvumidza kusarudza sezvinoita Debian.
Pindura kuna Ezel
Zvingave here kuti email ndiyo iri kushaya basa?
Ini ndinoshandisa shanduko uye yakanyatso kukwana, kunyangwe nguva pfupi yadarika chiperesi chekuongorora chave kuchindipa matambudziko. Uye kana iwe uchikwanisa kuwanda akawanda emaemail maakaunzi zvinononoka zvishoma kutanga uye kuvhara.
Zvino hongu, kusangana pakati peGnome + gmail + shanduko kwakakura LOL
Nharo dzakakosha. Kmail "yanga iri padhuze neKDE kubva pakutanga kwayo uye zvinoreva kuti chishandiso chekare." Kupesana neiyi "KDE Kube pachinzvimbo chishandiso chazvino."
Ndokunge, iwe unofanirwa kubvisa iyo "yekare" uye "yechinyakare" uye kugamuchira iyo "nyowani" uye "yemazuva ano." Kushandisa, tekinoroji, kuvaka, nezvimwe ... izvo hazvina maturo!
Ini ndinoshandisa Kmail pane yangu GNU / Linux desktop uye Thunderbird pane yangu Windows desktop. Izvo zvinondikurudzira zvimwe, pasina kuzengurira, Kmail. Ndakaedza mamwe maturusi "echimanjemanje" asina kundipa kugona kuita nesimba re "zvekare"; Asi pamwe ini ndapererwa nenguva zvakare